MAHAFINY Simhangar RWD-14b FSX & P3D - Freeware
Ny Simhangar RWD-14b "Czapla" dia teratany FSX fiaramanidina, voaangona FSX SDK acceleration dia manana ireo sari-tanety, peta-drindrina manokana sy aloka., Feo mahazatra, VC ary sary mihetsika. Ny boky iray feno dia miaraka amina fonosana (anglisy).
Add-on an'ny kalitao tsara indrindra! sary sy modely lehibe. Manome fahafinaretana marina manidina. Natao ho an'ireo mpankafy modely taloha.
Ny RWD-14 Czapla (LWS Czapla) dia fiaraha-miasa tafika Poloney fiaramanidina (fandinihana, Reconnaissance akaiky sy mifandray amin'ny fiaramanidina), natao tao amin'ny tapaky ny volana 1930s ny RWD ekipa, dia vokarina any amin'ny orinasa avy any 1938 LWS. Nisy andianà 65 fiaramanidina no naorina, ary indrindra no ampiasain'ny Air Force poloney squadrons fandinihana nandritra ny Ady Lehibe II in 1939. (Wikipedia)
Downloads 6 713
Nohavaozina taminy 16-12-2012